serotonergic စိတ်ကျဆေး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - ဗဟို dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ် serotonin ၏တားစီးမှုဖြင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်း? (2013) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
serotonergic စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏လိင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး: ဗဟို dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် serotonin ၏တားစီးကကမကထပြုခဲ့? (2013)
Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2013 အောက်တိုဘာ 12 ။ pii: S0091-3057 (13) 00238-4 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2013.10.004 ။
Bijlsma EY, ချမ်း JS, Olivier B ကို, Veening JG, Millan MJ, Waldinger MD, Oosting သည် RS.
ဆေးဝါးသိပ္ပံအဘို့အ Utrecht Institute နှငျ့အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Rudolf Magnus Institute မှ, Utrecht တက္ကသိုလ်, Sorbonnelaan 16, 3584CA Utrecht, နယ်သာလန်။
စိတ်မကျဆေး Antidepressants-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုးရွားစွာလက္ခဏာအသုံးပြုသူအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုသာသက်ရောက်သည်နှင့်ကုသမှုနှင့်အတူလိုက်နာမှုလျော့နည်းစေသည်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များဝတ္ထုမူးယစ်ဆေးအလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆန်းစစ်တစ်ခုမှတ်သားစရာများချဉ်းကပ်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတစ်ဦး 30minute မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှုအတွက် psychoactive ဒြပ်ပေါင်းများ၏စူးရှသော, subchronic နှင့်နာတာရှည်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ထားပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် reproducability ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးအဖြစ်အပြင်, ငါတို့သည်အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသော (putative) စိတ်မကျဆေး Antidepressants များ၏သက်ရောက်မှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်တင်ပြ။ ဤအ mechanistically ကွဲပြားစိတ်မကျဆေး Antidepressants (paroxetine, venlafaxine, bupropion, buspirone, DOV 216,303 နှင့် S32006) ၏သက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုစိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့်၎င်းတို့၏ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအခြေခံသည့် putative ယန္တရားဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအဓိကအား dopamine နဲ့ noradrenaline ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သောသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကငျးမဲ့နေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဓိကအား, serotonin ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတဆင့် serotonin neurotransmission တိုးမြှင့်ကြောင်းစိတ်မကျဆေး Antidepressants အားဖြင့် inhibited ကြောင်းပြသထားတယ်။ သူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်တစ်ပြိုင်နက် noradrenaline neurotransmission တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပုံမှန်မရနိုငျ, ဒါပေမယ့် noradrenaline နှင့် dopamine neurotransmission နှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပုံမှန်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလိင်ကဦးနှောက်ဆားကစ်အတွက် dopamine အချက်ပြမှာမိမိတို့ inhibitory သက်ရောက်မှုကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ။ တွေးဆနေပါတယ် ဝတ္ထုစိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏လက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းထို့ကြောင့်တစ်ပြိုင်နက် serotonin နဲ့ dopamine အချက်ပြနှစ်ဦးစလုံးကိုတိုးမြှင့်ကြောင်း compunds အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။